Sei Isa chinhu Inflatable Water Slide: The Four Most Common Zvinetso - China Shanghai Mutong
Sei Isa chinhu Inflatable Water Slide: The Four Most Common Problems
Children vaikwira mamiriro
Inflatable mvura emasiraidhi vava nevakawanda zvikuru uye kana uri rombo zvakakwana neImba mumwe munoziva sei. Mauya kurudyi nzvimbo kana muchitsvaka Info sei kugadzirisa munhu Inflatable mvura ondomoka. Banzai Falls chinoitika kuva chimwe chezvinhu zvinozivikanwa pezvitsiga iripo uye mumwe yakanakisisa kutengesa. Zvinosuruvarisa naivowo sokuti chimwe chezvinhu matambudziko nemasiraidhi zvakare.
Pane kugadzirisa zvimwe kuti zviri nyore kugadzira uye vamwe kuti vari mhiri tariro zvose. Ndiri kuenda kufukidza mana matambudziko rakajairika uye zvaungaita kuvatarisira pachako uye nokuponesa zvimwe mumwe vana venyu kufarira matoyi.
1. Mould: Well zhizha pano zvakare uye kuti rokutanga uchipisa zuva vana vako achikumbira mvura nemasiraidhi uye iwe rongonyora kubva okuchengetera uye kuwana zvavhuvha zvose. Mould iri dziine tsvina, dzisingatarisiki uye aigona kuva zvichibvira youtano asi dzimwe nguva kana hazvisi zvakare rakakura unogona kuchiparadza. Tanga nokunyatsonzwisisa leaner kuti akachengeteka kuti polyester kanivhasi ndingadai varumbidze Aurora Boat Clean Plus. Ungada kufunga kugeza Inflatable yako kamwe pagore kubatsira kuchengeta wakachena.
2. misodzi kana ponji ari Fabric: Pasinei kungwarira muri dzenyu Inflatable mvura ondomokamisodzi kana ponji zvinogona kuitika. Unogona kuzviona kusvikira iwe kudza kuti nemasiraidhi uye cherechedzai kuti iri riri pasi inflated kana kwete achiwedzeredza zvachose. Kana izvi zvaitika unofanira kutanga kunovhima misodzi ari jira.
Kana yemasiraidhi wako musingadi kudza zvachose zvakakanganisika zvingava zvakawanda zvakakwana kuti unogona kuwana nyore nayo. Kana yemasiraidhi wako chete zvishoma zvishoma inflated nayo pamwe zvinoreva kuti misodzi iri diki uye zvingava zvakaoma kuwana. A wemanomano kuti ichi nyore ndiko kudza ari nemasiraidhi uye squirt naro pfapfaidzo bhodhoro akazadzwa musanganiswa dhishi sipo nemvura. Kana uine buri racho kupukunyuka mhepo akonzera musanganiswa rouchenjeri uye unogona kuziva kunobva dambudziko rako. Kamwe iwe uwane vhinza ungada kuongorora zvimwe yemasiraidhi nechokwadi hakuna kupfuura mumwe.
Inogadzirisa mutswe kana misodzi iri Mucheka wotanga kuburikidza nokusonera kukwira gomba iri kudzivirira kubva achikura. Kamwe iwe vasonanidza naro uchada imwe namira uye chimedu mashoko chigamba. Unogona kutenga kanivhasi kugadzira zvi- kubva zvinenge kwese kuti anotengesa musasa midziyo vanofanira kuva nazvo vachigadzira matende.
Teverai Mirayiridzo kuuya Kit chete nechokwadi uchishandisa chigamba yakakura zvakakwana kufukidza yose mutswe. Kana chigamba zvinhu hazvisi guru zvakakwana unogona kushandisa zvinopfuura chimwe chete nechokwadi iwe bindepinde kuti vazvo munenge 1 padiki.
3. anotsemura vazvo: Zvinosuruvarisa kana yemasiraidhi wako anouya kunze panguva vazvo une chakaomesesa mhando kugadziriswa kuti. Vazhinji nguva ino mhando kukuvara ringave yakakura kugadzirisa asi kubva masiraidhi aya anodhura ungangoda kuti ape mumwe vapfurwa. Muchanzwa kutevera tsoka zvakafanana vachigadzira buri.
Tanga nokutaura nokusona musono kumusoro, iva nechokwadi kuenda zvishoma kudarika kupi paradzanisa rinomira. Pashure zvinoitwa zvauri kufukidza pamwe chigamba zvinhu. Zvadaro kuyambuka minwe yako uye kutsausa blower pamusoro kana yemasiraidhi anobata mhepo zvino zvipe bhabhadzira pamusoro musana.
4. A chakaremara kana Broken Blower: Kana blower chikwata kwakaipa kana muine ruzivo pamwe zvemagetsi injini kugadziriswa unofanira here kuritsiva. Unogona kutenga yokutsiva blowers musi eBay kuti pose kubva $ 50 - $ 200 zvichienderana nemhando uye ezvinhu. Unofanira kuenzaniswa blower Kukura uye simba kune uya zvaunazvo kuti ishande zvakanaka.
Banzai Falls harisi chete nomuiti Inflatable mvura emasiraidhi pane dzimwe pezvitsiga akafanana Blast Zone uye Bounceland umo maonero andaiita kupa yepamusoro unhu chigadzirwa. Banzai sokuti dambudziko ne mukurumari inotungamira vanhu vazhinji saka kutsvaka mirayiridzo sei kwavari. Ndinovimba uchikwanisa kugadzira yemasiraidhi yako asi kana asina tarisa vamwe mavanga.
Sei Isa chinhu Inflatable Water Slide: The Four Most Common Problems Related Video: